WhatsApp Emojis uye Emoticons ane Zvinoreva - EmojisWiki.com
Chiitiko uye Mutambo
WhatsApp Emojis uye Emoticons ane Zvinoreva
Emoticons dzakagadzirwa mugore ra1990 uye raive danho rakakura pakuchinja nzira yekutaurirana nevanhu vachishandisa dhijitari media. Kubva kwavakabva ivo vakabatsira kupa revo iri nani kumazano uye kukubvumidza kuti utaure manzwiro ako kana manzwiro nenzira yakafara.
¿Wanga uchiziva here kuti iwe unogona kuwana mazana e emojis pane yako dijitari keyboard?? Izvi zvinowanzotsiva zviratidzo zvagara zvichishandiswa kumiririra mamwe matauriro akadai sekunyemwerera, mwoyo, kana kuseka kukuru. Izvi zviso zvidiki zvine matauriro asingaperi.
Nekuda kwezviri pamusoro, muchinyorwa chino tinodonongodza runyoro rwema emoticons nezvaanoreva, iwe unozoziva kuti emojis chii, chii chavanoshandisirwa, izvo zvinonyanya kufarirwa uye nezvimwe.
Rondedzero ye emojis uye emoticons ine zvinoreva nemapoka eWhatsApp neFacebook
WhatsApp Chikafu uye Chinwiwa Emojis uye Emoticons ane Zvinoreva
Emojis uye Emoticons eWhatsApp Symbols ane Zvinoreva
WhatsApp Mhuka Emojis uye Emoticons ane Zvinoreva
WhatsApp Chiitiko uye Mutambo Emojis uye Emoticons ane Zvinoreva
Emojis uye Emoticons yeWhatsApp Zvinhu zvine Zvinoreva
WhatsApp Kufamba uye Nzvimbo Emojis uye Emoticons ane Zvinoreva
WhatsApp Vanhu Emojis uye Emoticons ane Zvinoreva
Chii chinonzi emoticons kana emojis?
Iwo maemoticons ane hukama nemavara anoshandiswa mumatunhu kana mameseji emagetsi uye mapuratifomu epamhepo akadai se Instagram, WhatsApp kana Facebook anomiririra manzwiro evanhu, zvishuwo, mazano kana manzwiro nenzira inooneka yakasiyana.
Sezvatakaratidza pakutanga mavambo ayo ndeyeJapan uye izwi rayo rakanyorwa se 絵⽂字 iro rinoumbwa nereti "e" uye izwi rekuti "moji". Izvi zvave nemukurumbira zvekuti kunyangwe mamwe ma academies akatovatora nekusarudza mamwe seaya shoko regore in 2015.
Kusikwa kweaya maratidziro ekuona anonyanya kuverengerwa Shigetaka Kurita. Nekuda kweizvi, vashandisi venguva yacho vaimiririra mamiriro ese ese vachiashandisa mumavara zana nemakumi matanhatu anotenderwa nemeseji.
Pakutanga emoji yaive yakaganhurirwa kuhukuru hwe12 x 12 pixels zvakanyanya nekuda kwekugumira kweiyo graphic tekinoroji yenguva. Sezvo aya maratidziro ekuona aive asiri pasi pekodzero, vatengesi vazhinji veJapan vakatora mukana wekugadzira yavo mifananidzo.
Kutenda kune zviri pamusoro, nhasi zviratidzo izvi zvinoshandiswa kakawanda uye zvinobatsira zvikuru pakunyora chero meseji.
Chii chavanoshandiswa paWhatsApp neFacebook?
MaEmojis pakutanga aishandiswa mumameseji kumiririra mamwe manzwiro. Nekudaro, nekuchinja kwanhasi kwetekinoroji, sanganisira pfungwa kubva mumisoro yakasiyana-siyana kuti iwe uratidze akasiyana-chaiyo mamiriro ezvinhu nenzira yakanakisa inobvira.
Mumatunhu eWhatsapp, Facebook ne Instagram anobatsira zvikuru, pamwe chete mumachats ese ekuti iwe uratidze manzwiro akadai serufaro, kufarira, tariro, rudo, kudada, kugadzikana, kutenda, kurudziro, kudada uye zvimwe zvakawanda. Vanokupawo nzvimbo yekutaura manzwiro akadai semufaro, rudo, tsitsi, kushamisika, kuseka, kusuwa, kutsamwa, pakati pevamwe.
Semuenzaniso wezviri pamusoro, unogona kushandisa zviso zvinoonekwa pakiibhodhi yako yedhijitari kumiririra kuti unonzwa kusuwa kukuru nekuda kwechimwe chikonzero. Zvakare vanoita kuti zvive nyore kwauri kuratidza nguva dzako dzekufara kana kuchinja kwemaitiro ako.
Aya mapikicha anokubatsira kudzikisa huwandu hwemashoko aunoda kutaura, senge zano rekufamba, kuenda kunotenga, kurara, kudya chikafu chinonaka, nezvimwe.
Ndeapi anonyanya kushandiswa emojis kana emoticons mumatunhu eFacebook neWhatsApp?
Pano tinopa mamwe anonyanya kuzivikanwa emojis muWhatsApp uye Facebook zvimiro uye zvakare zve Instagram.
Kana iwe uchinzwa kuda mumwe munhu, iwe uchida kuve nerudo kana iwe unoshamiswa nerunako rwemumwe munhu kana chimwe chinhu, unogona kushandisa rudo emoticon. Chiso chinofara chine moyo miviri mumaziso chinomiririrwa.
Imwe yeanonyanya kushandiswa zviratidzo ndeyekutya kana kupopota emoji., chiso chakashamisika chinomiririra kutya kana kutyisa uye unogona kuchishandisa kuratidza fungidziro kana kukanganisa.
Iyo inohwinya emoji inomiririra imwe yedzakanyanya misikanzwa yekuratidza kune mumwe wako kuti iwe unofanirwa kunge uri mubatsiri wechimwe chinhu kana kungovakoka kumutambo.
Kana iwe uchida kuratidza kusuruvara, kune chiso chinochema chinozviratidza nyore nyore. Iko kunetseka kwakadzama uye kunogona kukubatsira munguva dzakaoma zvakanyanya.
Izvo zvigunwe kumusoro zvinobatsira kuratidza chibvumirano, kubvumidza kana kubvumirana pane chimwe chiitiko kana zano revamwe.
Iwe zvakare unowana iyo emoji kana inoshamisa kumeso inobatsira zvikuru kuratidza kusava nechokwadi nezvepfungwa yakasimudzwa nevechitatu mapato. Inomiririrwa nechiso chekusatenda, nemaziso akasununguka.
Chiratidzo chine misodzi yekuseka kana mufaro chinozivikanwa zvakare nekuti chinokubatsira kuratidza kufara kwakanyanya, kuseka kana kuratidza kuti haugone kumira kuseka pamusoro pechimwe chinhu. Unogona kuzviziva zviri nyore nechiso chayo chinonyemwerera chine madonhwe maviri, rimwe muziso rimwe nerimwe.
Imwe yeanonyanya kufarirwa pictograms ndeye chiso chekutsvoda kwemoyo. Icho chiso chinotumira kutsvoda uye chifananidzo cherudo chinogona kuita kuti chero munhu anzwe zvakanaka.
Mutambi weflamenco chiratidzo chinotaura chishuwo chekuenda kumabiko. Unogona kuishandisa zvakakwana kuratidza kuti unoda kusiya imba yako kwemaawa mashoma uye uve nenguva yakanaka.
Nei zvakakosha kuti uzive izvo chaizvo zvinoreva emoticons kana emojis?
Dzimwe nguva vanhu vanogovana zvinorehwa emojis nenzira isiriyo, kungave nekuda kwekushaikwa kweruzivo kana nekuti nharaunda yetsika yakavapa kushandiswa kwakasiyana kwenguva yakareba, zvichikonzera kutorwa kwavo kusingaenzaniswi.
Chokwadi ndechekuti emoticon yega yega ine zita repamutemo ndiyo nzvimbo yekutanga kuti ipe revo munharaunda yaunoshandisa, sezvo zvikasadaro, panogona kunge paine kusanzwisisana uye zvingave zvinogumbura, zvisingafadzi kana kunyadzisa nekuda kwekutadza kunzwisisa izvo chiso chidiki chinorevei.
Semuenzaniso, kune zvimwe zvinomiririra zvinoratidzira tsumo dzeChinese sedzetsoko nhatu. Izvi zvinoreva Usaona Zvakaipa, Usanzwa Zvakaipa, Usataura Zvakaipa, uye zvakadaro vanhu vanoshandisa zviso izvi mumwe nemumwe kuratidza kusuwa, kutarisa, kana kuchengeta chakavanzika.
Chiratidzo che vakadzi vane nzeve dzetsuro ndizvo zvakafanana nekunzwanana, asi vanhu vanowanzo shandisa emoji iyi kuratidza kunakidzwa, kufara kana kutofara. Izvi kunyanya mumapoka eshamwari kana shamwari uye zvinosanganisira masocial network akadai seFacebook, Instagram kana WhatsApp.
Kana zvasvika pakumiririra kuchema, kushamisika kana kutya, vanhu vanowanzo shandisa emoji yechiso nemaoko avo pamatama. Nekudaro, chiratidzo ichi chine hukama nebasa reakakurumbira Edvard Munch.
Iwe zvakare unowana chiratidzo chetsvina, icho dzimwe nguva chinonyepedzera kuva creamy chokoreti ice cream. Chokwadi ndechekuti kusikwa kwayo kune hukama netsika dzechiJapan uye inomiririra rombo rakanaka.
Sezvatakatsanangura mumienzaniso yapfuura, emoticon yega yega ine zvayaireva, kunyangwe vanhu vazhinji vachizvipa yavo. Asi nguva dzose zvakakosha kuvanongedza sezvazvinofanira kuva kuitira kuti kutaurirana kuwedzere uye mameseji asanzwisiswe.